I-Vaccine ye-Chicken Pox Intenuated China Manufacturer
I-Biotechnology Iimveliso ezigqityiweyo zokugqibela,I-Biotechnology Iimveliso zexesha eliQinisekiso lokuVunywa,I-Biotechnology Iimveliso ezigqityiweyo
Changchun BCHT Biotechnology Co. [Jilin,China] Uhlobo lo shishino: Manufacturer Main Mark: Asia Ngaphandle: 1% - 10% ICredit: GMP Inkcazo: I-Biotechnology Iimveliso ezigqityiweyo zokugqibela,I-Biotechnology Iimveliso zexesha eliQinisekiso lokuVunywa,I-Biotechnology Iimveliso ezigqityiweyo
Home > Imveliso > I-Varicella Vaccine (Live) > Iimveliso ezigqityiweyo > I-Vaccine ye-Chicken Pox Intenuated
I-Vaccine ye-Chicken Pox Intenuated
 I-Vaccine ye-Chicken Pox Intenuated
Ukulawulwa kwezigonyo kuthiwa ukugonywa . Ukugonywa yindlela efanelekileyo kakhulu yokuthintela izifo ezithathelwanayo; bandile omzimba ngenxa ugonyo kakhulu inoxanduva ekupheliseni lonke lwe ingqakaqa kunye nomqathango izifo ezifana nepoliyo , imasisi , kunye nominxano ukusuka ezininzi zehlabathi. Ukuphumelela kokugonya kuye kwafundwa ngokubanzi kwaye kuqinisekiswa; umzekelo, ukuba isitofu sogonyo yomkhuhlane , lo sokugonya se-HPV , yaye ugonyo chicken pox . I- World Health Organisation (WHO) ithi iingxelo zokugonywa kwezigulane zifumaneke ngokufumaneka kwezi-24 ezihlukeneyo ezikhuselweyo .
Related Products List: I-Biotechnology Iimveliso ezigqityiweyo zokugqibela , I-Biotechnology Iimveliso zexesha eliQinisekiso lokuVunywa , I-Biotechnology Iimveliso ezigqityiweyo , I-Varicella Biotechnology Iimveliso ezigqityiweyo , I-Biotechnology Iimveliso zokugqibela zeBilo , I-Biotechnology Iimveliso eziQinisekayo , I-Gelatin Iimveliso ezigqityiweyo zonyango , I-Biotechnology Iimveliso zeBilo eziLophili